WARBIXIN:L Waa Sidee Xaalada Kooxda Real Madrid Ka Hor Kulanka El Clasico , Dhaawacyada, Ganaaxyada Iyo Shaxda Wajahi Karta Barcelona | Laacibiin.net
Home » Falanqeyn » WARBIXIN:L Waa Sidee Xaalada Kooxda Real Madrid Ka Hor Kulanka El Clasico , Dhaawacyada, Ganaaxyada Iyo Shaxda Wajahi Karta Barcelona
WARBIXIN:L Waa Sidee Xaalada Kooxda Real Madrid Ka Hor Kulanka El Clasico , Dhaawacyada, Ganaaxyada Iyo Shaxda Wajahi Karta Barcelona	Real Madrid ayaa weli laga badin xilli ciyaareedkan. Zinedine Zidane ayaa ku ku fadhiya kaalinta ugu sareysa Horyaalka La Liga marka uu usafrayo kooxda Barcelona isbuucaan soosocda.
Kulankii ugu danmbeeyay xalay waxa uu guul 6-1 garoonkooda kaga gaaray kooxda Leonesa kulan katirsan ciyaaraha Copa del Rey.
Madrid ayaa hadda lix dhibcood ku hogaamineysa Horyaalka Primera Division ka hor kulanka Clasico ee ka dhacaya Camp Nou Sabtida.
Real Madrid ayaa laga badin tan iyo markii ay guuldarro 2-0 kala kulmeen kooxda Wolfsburg tartanka Champions League bishii April.
Ciyaartaas ayaa dhacday afar ka dib markii ay 2-1 kaga badiyeen Clasico la soo dhaafay Barcelona,haddaba halkaan ayaa kusoo gudbin doonaa diyaar garowga Madrid ka hor kulanka Clasico.
Real Madrid waxaa ka maqnaan doona Gareth Bale ka dib markii ciyaaryahanka garabka ka ciyaara ee Wales uu soo gaaray dhaawac canqowga ah kulankii ay kooxdiisa 2-1 kaga badiyeen Sporting CP Champions League isbuucii hore, waxaana uu marayaa qalliin ka dhacaya magaalada London talaadada.
Toni Kroos ayaa wali ku maqan dhaawac, halka Fabio Coentrao uu sidoo kale qarka u saaran inuu seego kulankan, Danilo ayaa shaki uu ku jiraa inuu ciyaaro kulanka ka dhacaya Camp Nou.
Tababare Zidane ayaa u arkaya Casemiro oo muddo dheer garoomada ka maqnaa inuu safan karo kulankaan ,kadib markii lagu soo bilaabay ciyaartii xalay kooxdiisa 6-1 kaga badiyeen Leonesa Cultural.
Inkastoo ay dhibaato dhaawac ah waayadaan dambe ay daashadeen, Real Madrid majiro ciyaartooy dhaawac kaga maqnana doono kulanka Clasico ee ka dhacay Camp Nou dhamaadka Isbuucaan.
Kabtan Sergio Ramos, oo caasn loo tagaay kulankii ugu dambeeyay ee Clasico kaasoo dhacay bishii April, ayaa kaliya hal jeer u jiray inuu seego, ciyaartaan, laakiin waa uu ka badbaaday.
Iyada oo Gareth Bale dhaawac soo baxay, Zinedine Zidane ay u badan tahay in ay baryaan Lucas Vazquez in aad ku buuxisid on xaq weerarka Real Madrid, iyadoo ciyaaryahanka garabka ka ciyaara ayaa la filayaa in ay dib ugu soo daadiyaa khadka dhexe ee dheeraad ah ee formation 4-4-2 marka Barcelona ay leeyihiin kubada .
Iyadoo Pepe dhaawan kasoo laabtay dhaawac, Raphael Varane ayaa u muuqda mid kusoo bilaaban doona booska daafaca dambeedka dhexe si uu kaga garab ciyaaro kabtan Sergio Ramos, halka Dani Carvajal loo dooran karo daafac midig oo uu ka ciyaarayay Danilo oo shaki qaba.
Khadka dhexe, Casemiro ayaa soo laabtay, iyadoo Zidane hore uu u heystay Mateo Kovacic , Luka Modric iyo Isco oo wacdaro ka dhigay kulankii Vicente Calderon.
Link to this post:<a href="http://www.laacibiin.net/wararka/warbixinl-waa-sidee-xaalada-kooxda-real-madrid-ka-hor-kulanka-el-clasico-dhaawacyada-ganaaxyada-iyo-shaxda-wajahi-karta-barcelona/">WARBIXIN:L Waa Sidee Xaalada Kooxda Real Madrid Ka Hor Kulanka El Clasico , Dhaawacyada, Ganaaxyada Iyo Shaxda Wajahi Karta Barcelona</a>